Catoosh oo maalintii labaad tababar la qaatay kooxda Heegan – Gool FM
Catoosh oo maalintii labaad tababar la qaatay kooxda Heegan
(Muqdisho) 22 Agoosto 2017. Ciyaaryahankii hore kooxda Dekedda Cabdicasiis Catoosh ayaa maalintii labaad tababar la qaatay kooxda Heegan oo ka mid ah naadiyada ugu awooda badan dalkeena Soomaaliya.
Laacibka guran oo aan xiriir la sameynay ayaa inoo xaqiijiyay in shalay iyo manta uu tababar la qaatay kooxda Ciidanka booliska oo xiddigan si weyn loola xiriirinayay .
Macallinka naadiga Heegan Gidaamoow ayaa isna inoo sheegay in goolhaye Mustaf Nakuja,Baazi Maxamed Baana iyo Catoosh ay kooxda heshiis la gashay isagoo sheegay in maalmaha soo aadan ay soo bandhigi doonaan.
Catoosh ayaa ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya, waxa uuna horay u soo maray Horseed,Jeenyo iyo Dekedda isagoo kula guuleystay koobab kala duwan.
Heegan ayaa horay u heysatay weerar aad u xoogan oo ay qeyb ka yihiin Jabriil Xasan Fariid, Bile Muxudiin,Deeq Aaryo iyo Cabdoow sidoo kale waxaa kooxda ku sugan weeraryahano da’yar oo uu qeyb ka yahay Cabdirsaaq Zalatan.
Jack Wilshere oo la ganaaxayo…(Bal arag wuxuu sameeyay)…SAWIRRO+MUUQAAL
Dagaalkii Barcelona iyo Liverpool ee Coutinho oo soo dhammaaday….(Yaa ku guuleystay???)